जेलबाट निस्केपछि सलमानले किन देखाए तीन औंला ? यस्तो थियो फ्यानहरुलाई सन्देश - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»जेलबाट निस्केपछि सलमानले किन देखाए तीन औंला ? यस्तो थियो फ्यानहरुलाई सन्देश
जेलबाट निस्केपछि सलमानले किन देखाए तीन औंला ? यस्तो थियो फ्यानहरुलाई सन्देश
By पूजा बानियाँ on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०९:१७ हलिवुड/बलिवुड
एजेन्सी। सलमान खान शनिबार जेलबाट जमानतमा रिहा भएपछि राति आफ्नो घर ग्यालेक्सी अपार्टमेन्ट पुगे । उनी निजी हेलिकप्टरमा घर पुगेका थिए । उनी घर पुग्दा घरबाहिर फ्यानको ठूलो भीड थियो । आफ्ना फ्यानको प्रेमप्रति आभार व्यक्त गर्न सलमान आफ्नो परिवारसँग घरको बालकनीमा आए । यहाँ उनी दुई मिनेटजति मात्रै रोकेका थिए । यस क्रममा उनले तीन औंला देखाएर आफ्ना फ्यानहरुसम्म आफ्नो सन्देश पुर्याए ।
सलमानले पहिले हात हल्लाएर फ्यानहरुलाई अभिवादन गरे । त्यसपछि हात जोडेर सबैलाई आभार व्यक्त गरे । यसपछि उनले ३ औंलाले इशारा गरे । सलमानले तीन औंला देखाएको यो पहिलो पटक भने होइन । उनी धेरै पटक तीन औंलाको यही इशारा गर्दै गरेका देखिएका छन् ।
सलमानको यो चर्चित संकेत फिल्म जय हो बाट चर्चामा आएको हो । यो फिल्मको कथा सामाजिक सेवाको विषयवस्तुमा आधारित छ । फिल्ममा सलमानले सन्देश दिएका छन् ‘कसैबाट सहयोग लिएपछि उसलाई धन्यवाद दिनुको साटो आफूले पनि तीन जनाको सहयोग गरौं । यसो गर्दा सबै समस्या समाधान हुँदै जानेछन् ।’
सलमानको यो फिल्मलाई फ्यान र आलोचकले त्यति मन पराएनन् । तर, फिल्मको माध्यमबाट दिइएको सन्देश भने निकै चर्चित बन्यो । यही कारण सलमान पटक पटक तीन औंलाको संकेत गर्दै गरेका भेटिन्छन् । उनी आफ्ना फ्यानसँग भेट्दा अक्सर यो संकेत गर्न बिर्सन्नन् ।